トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Kana kugadzwa yemashoko nepachinko yaiitirwa kazhinji Xintai, kana aiwanzoshandisa tafura
Munyika pane zvakawanda ane nepachinko yaiitirwa, asi Xintai uye zvitoro zvitoro uye raishandiswa tafura pakati ndiyo musimboti, pane zvakasiyana-siyana nepachinko parlors. The zviratidzo michina mitsva kazhinji nepachinko yokumusoro, iri nyore nzvimbo pfupi vatengi vakaungana, waizorera ndechokuti pedyo kukwikwidzana chitoro yakawanda. Xintai ndiko, nokuti kunogona kutora mari yakakura, uye zvakadai rokutengesa uye kwakakomba mubereko haisi kusvika pamwero richengetwe, iwe wava zvakaoma. Kana uchida kuti ataure
Xintai akawanda, ndiye Xintai mazuva anoverengeka sumo, zvikuru kuti vamwe mienzaniso Xintai ari kupora machine. iyi ndiyo, I zvakaipira Xintai kazhinji nepachinko yokumusoro. Xintai ari nepachinko yokumusoro iri pakati, kana uchida kutamba vamwe kupfuura Xintai, ndinofunga kuti zviri nani kuenda kuridza nguva kuti mushure memazuva mashoma kubva musumo Xintai.
Chaizvoizvo, Xintai kazhinji kutsamwa, chitoro nokuti pamusoro-kwakamboitwa munharaunda Note! ?
Chaizvoizvo, kana uchida top okusuma Xintai mudunhu, kana asina kukwanisa varove chete pachitoro yacho Xintai, muri zvitoro zhinji vanofunga kuti hapana chikonzero kuti asunungure dzingaidza payout. Zvisinei, nguva refu nguva dzakakurumbira yokutevedzera, kana uchida kukura huru-chiratidzo muenzaniso kuchitoro, ungada kuvhura. nzvimbo iyi, zviri pfungwa management.
uye, sezvo zviri kushandiswa pachikuva kazhinji nepachinko yokumusoro, zviri zvishoma zvinoita uye pedyo kukwikwidzana chitoro chiri Suburban chitoro, ndinofunga kuti ndiyo hombe mutengi chawo ari nguva muzinda. Ndikaisa yakawanda yaishandiswa pechikuva, nepachinko yokumusoro iri mutengi nechigadziko achiri zera rukoko iri padunhu muitiro. Recent Xintai ndiye mufananidzo kurwa uye latency mukana kushanduka, nezvimwewo, nokuti pane kunzwisisa yokutevedzera zhinji, achauya vanowanzotevedzera kuregwa. Kana
munhu akashandisa tafura, Xintai zvakadaro rabvumwa mutengi pangoro kuti kuzeza, ndiko kuti zvichida kumuka mune rokutengesa. Kana izvozvo zvikaitika, hatina chikonzero kumanikidza okutanga ari michina mitsva. In Mafuro nepachinko parlors, kunyanya pasina zvakawanda vatengi vari kuerera, mukanyanyisa kutengesa, akaoma kupfuura pamberi chechitima chitoro. Iyoyo, vaishandisa chidhina, Xintai mari ndiwo zvakare isingadhuri zvichienzaniswa, kwete kana kuzoita mari dziri nyore Hove achava chinhu. Sezvo
Xintai ndikaisa yakawanda, nokuti kupora haasi chete kuisa kwazvo Toka akashandisa chawo, hapana chokwadi chokuti mari aibuda hakungavi kuti chakakomba. All iri pakutsvaga nepachinko chitoro nzvimbo uye mutengi chawo uye zvitoro rokutengesa ayo itsika. Munguva, asi anogona kuva pane imwe nepachinko yokumusoro nokushayiwa mari aibuda, nepachinko kwakadaro yokumusoro iri, ndinofunga kuti rekukwazisa kutsunga zvinogoneka kana uchitarisa payout ezvinhu uye chipikiri kuchinja.
kuburikidza kudzivisa kwokutanga mutengo ane akashandisa tafura, akadai dura mutemo rutapudzo ari payout kusvika regulars, utariri policies zvaizova nani kufunga kuti kunongova uwandu Pachinkoya.
vo kunyanya kuMiddle Ages kumira Xintai, nepachinko parlors kuti murege vaunze bhora kusvikira pakatanga rokutanga, ndinofunga kuti yavaipora muoti angafunga kuti chitoro simba. Tarirai paavhareji, akasuma zuva rokutanga akadai Xintai iri, chitoro yakawandisa tightening zvipikiri nokuti Barker ndiye zvishoma. Nepachinko chitoro chero mhando kana nepachinko yaiitirwa chinhu ndechokuti kuenda newe, tapota edza kuona.